एनसेलको कलात्मक कर- विचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २२, २०७६ आहुति
राजनीति मात्र सही भएर पुग्दैन, त्यसलाई सफल पार्न कलाको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिकर्मीहरूबीच यो भनाइ सर्वस्वीकार्य रहिआएको छ । आजको पुँजीवादी विश्व राजनीतिलाई दिशानिर्देश कसले गरिरहेको छ ? स्पष्टै छ- बहुराष्ट्रिय कम्पनी र देशभित्रका निगमीकृत पुँजी घरानाहरूले । सीधा राजनीतिलाई निर्देशित गर्न तम्सिनेहरूले राजनीतिमा कलाको प्रयोग गर्नु अनिवार्य बन्छ ।
नेपालमा हाल चर्चित एनसेल सञ्चार ब्रान्ड चलाउने आजसम्मका कम्पनीहरू त्यही डयाङका पुँजीवृत्तहरू हुन् । त्यसैले एनसेलको कर प्रकरण पनि निकै कलात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन पुगेको छ । कला हो, प्रयोगहरू गर्न मिल्छ ।
कलाकारले 'महाभारत' ग्रन्थमा जस्तै एक से एक पात्र सिर्जना गर्न सक्छ । कलामा भ्रमहरूको मायावी ज्वारभाटाद्वारा लोकलाई दिग्भ्रमित बनाइदिन सकिन्छ । कलाकार भए कलामा एउटा कुरा प्रस्तुत गर्न भने बाध्य हुन्छ, त्यो हो- परस्परविरोधी चीजहरूबीच द्वन्द्व ।
द्वन्द्व पात्रहरूबीच हुन सक्छ या विचारहरूबीच, सन्दर्भहरूबीच पनि द्वन्द्व हुन सक्छ, या हुन सक्छ फरक फरक कल्पनाहरूबीच तर निश्चित छ- कलाको प्रयोग गर्न कोही तम्सिए द्वन्द्व छताछुल्ल हुन्छ र त्यही द्वन्द्वको घर्षणले देखाउँछ समकालीन समाजको यथार्थको आंशिक या विहंगम चित्र । बहुराष्ट्रिय पुँजीवृत्तको एनसेलको कलात्मक कर प्रकरणले पनि नेपाली समाजको मुख्य द्वन्द्वलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ । गजबका पात्रहरूलाई रंगमञ्चमा उतार्न थालेको छ र हावाले उडाएका पातजस्ता निरीह, दिशाहीन मनोविज्ञानहरूलाई आफू उडेको दिशा ठम्याउनै हम्मे पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
गत साता एनसेलको कलात्मक कर प्रकरणद्वारा घाइते भएकाहरूको एउटा वक्तव्य आयो । त्यो वक्तव्य सत्ताधारी पार्टी नेकपा (नेकपा) सम्बद्ध दुई विद्यार्थी र दुई युवा गरी चार संगठनको थियो । उनीहरूले वक्तव्यमा भनेका थिए- एनसेल कर तिर, सरकार कर उठाऊ नत्र हामी एनसेलविरुद्ध संघर्ष गर्छौं ।
तीन वर्षदेखि कर नउठाउने मात्र हैन, कर छल्न व्यवस्था मिलाउने सरकारविरुद्ध चाहिँ 'कर उठाऊ !' संघर्ष जरुरी छैन ? कर नतिर्ने कम्पनीभन्दा कर नउठाउने सरकार दोषी हो, यो त सरल विषय हो नि । नेकपा (नेकपा) भित्रका ठूलो संख्याका युवा आफ्नो पार्टी ठीक दिशामा आओस्, माया नै मार्नुपर्ने गरी पार्टी नडुबोस् भन्ने छटपटीमा होलान् भनी लख काट्न त सकिन्थ्यो तर वैचारिक रूपमा युवाहरू नै यति धेरै दिशाहीन ढंगले खुसीसाथ वेग मारिरहेका छन् भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो थियो !
त्यो वक्तव्य पढ्दा लाग्छ- देशमा सरकार र एनसेलको द्वैध सत्ता चलिरहेछ । होइन भने युवा र विद्यार्थी खोपामा क्रियाशील सरकार सञ्चालक पार्टीका नेताहरू एनसेलको सिमकार्ड बहिष्कार गर्न सार्वजनिक अपिल किन गर्छन् ? एनसेल अर्को सत्ता होइन भने त आफ्नै सत्ताको नियममुताबिक सञ्चालित कम्पनीको कामलाई बहिष्कार गर्ने सत्ताधारी पार्टीकै आधिकारिक संगठनहरूको निर्णय र अपिल नैतिक कसरी हुन्छ ? उनीहरू सिमकार्ड नै बहिष्कार गर्ने स्तरमा उत्रनुपर्ने चुनौती एनसेलले दिएको हो भने सत्ताबाहिरको नेकपाले एनसेललाई चुनौती दिन बम पड्काउनुलाई कसरी गलत प्रमाणित गर्ने त ? प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा हुन्छ ।
आफ्ना युवा विद्यार्थीलाई सत्ताधारी पार्टीले नै एनसेलविरुद्ध परिचालन गर्न तम्सेको मान्ने हो भने सरकार र सरकारधारी पार्टीले आम जनतामै अपिल गर्नुपर्ने थियो, आफ्ना युवा विद्यार्थी मात्र उतारेर पुग्दैनथ्यो । यथार्थमा द्वैध सत्ताको स्थिति हुँदै होइन, त्यसैले त नेकपा -नेकपा) र त्यसको सरकार आफ्ना युवा विद्यार्थी संगठनजस्तो दिशाहीन काममा उत्रेको छैन, बरु ऊ गम्भीरतापूर्वक मौन छ । सायद सरकार एनसेलको यो कर प्रकरणलाई कसरी आफ्नो उपलब्धि ठहर गर्ने भनी तर्क वा गतिलो हँसाउने उखानको खोजीमा छ ।
जब राज्यको नीतिअन्तर्गत सञ्चालित देशी वा विदेशी कम्पनीले कर तिर्दैनन्, ती स्वतः सरकारको कारबाहीको दायरामा आउँछन् । विषय त्यहीँ सकिन्छ । त्यसैले एनसेलको कर प्रकरणमा एक मात्र दबाब नैतिक र जायज हो- सरकारले कर किन नउठाएको ? तुरुन्त कर असुल गर । एनसेल ब्रान्डको विगतको सञ्चालक कम्पनी टेलियासोनेराले अहिलेको सञ्चालक कम्पनी आजिएटालाई बिक्री गर्ने समयदेखि आजसम्मका नेपालका सरकारहरूको गतिविधिलाई विश्लेषण गर्दा सरकार नै एनसेलसँग कर असुल गर्न उत्सुक नभएको छर्लंगै देखिन्छ ।
यस अविधमा तीन पार्टी नेकपा (माके), नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस नै सरकारमा वा प्रतिपक्षको मूल भूमिकामा थिए । आज दुई पार्टी मिलेर नेकपा -नेकपा) को सरकार छ, मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेस छ । त्यसकारण एनसेल कर प्रकरणको सम्पूर्ण जिम्मा यी दुई पार्टीले लिनैपर्छ र आज जवाफदेहिता भने नेकपा (नेकपा) कृत सरकारको हुन्छ नै ।
यो त राज्य सञ्चालनको बाह्रखरी हो तर यस अवधिका सरकारहरू मौन रहँदै आए बरु विषयलाई नागरिकले अदालतमा पुर्‍याएपछि मात्र चर्चामा छ । प्रतिपक्षलाई आधा खर्बको विषय एक दिन संसद्मा हंगामा गर्ने स्तरको पनि लाग्दैन । नेपाल सरकारअन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, ठूलो करदाता कार्यालय र मालपोत कार्यालयभन्दा माथि पटक्कै नआउने यो एनसेल कर प्रकरणको मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको बेन्च बसेर रंगीचंगी निर्णय गर्नुपर्ने र युवा विद्यार्थी संगठनहरूले अरण्यरोदन गर्नुपर्ने स्तरमा कसरी माथि आयो ? किनभने यो प्रकरण आफैंमा कलात्मक थियो ।
कोही नेपाली एक आना वा एक धुर जग्गा कसैलाई बेच्न मालपोत कार्यालयमा पुग्यो भने सबैभन्दा पहिले जमिनको मालपोत अर्थात् कर नतिरी बेचबिखनको प्रक्रिया एक बित्ता अगाडि बढ्छ ? बढ्दैन । कुनै कम्पनी बेच्दा पनि प्रक्रिया यस्तै हो । तब एनसेल सञ्चार ब्रान्डको पहिलेको कम्पनीले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर नतिरी कसरी अहिलेको कम्पनीलाई बेची सेयर अर्को कम्पनीका नाममा सारेर जान सम्भव भयो ? मुख्य प्रश्न यही नै हो र कलात्मकता यस प्रकरणमा यहीँ घनीभूत भएको छ ।
कम्पनी बेच्ने भनेको सेयर बेच्ने हो, सेयर बिक्री सदर गर्नु पहिले कर तिरेको प्रमाण किन खोजिएन ? के सरकारमातहतका अंगहरूले नियम मिचेर एनसेल बिक्री गराएका थिए ? त्यस्तो हुन्थ्यो भने सरकारका त्यस्ता निकाय कारबाहीमा परिसक्थे तर परेका छैनन् मात्र होइन, तिनका बारेमा सरकारहरूले प्रश्नसम्म उच्चारण गरेका छैनन् ।
यो प्रकरण सुरु भएपछिको कुनै पनि सरकारले आफ्ना तल्ला निकायलाई दोषी देखेको छैन भन्नुको सीधा मतलब हुन्छ- यस अवधिका सरकारहरूको पूरै सहमतिमा कर नतिरीकन कम्पनी बेचबिखन गराइयो । संयोग, यस अवधिमा सरकार र मुख्य प्रतिपक्षमा यिनै आजका मुख्य दुई पार्टी थिए । एनसेल किनबेच हुँदा सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै थिए र अर्थमन्त्रीचाहिँ बालुवाटारको सरकारी आठ आना जग्गामा कला प्रदर्शन गर्ने विष्णु पौडेल ।
मुलुककै ठूलो व्यापारिक कारोबार हुँदा करको विवाद यथावत् रहने गरी कसरी किनबेच सम्भव भयो ? त्यसपछिको सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए र अर्थमन्त्री हालका सभामुख । दाहाल अध्यक्षताको मन्त्रिमण्डलको एउटा बैठकले हालको आजिएटालाई करको दायित्वबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो तर मुख्य सचिव विदेश रहेका बेला अरू सचिवले निर्णयपुस्तिकामा त्यो निर्णय लेख्न अस्वीकार गरेकाले विषय उम्किन नपाएको हो ।
लगत्तै बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए, उनीहरूले त्यस विषयमा चासोसम्म प्रकट गरेनन् । आज सरकारी र प्रतिपक्षीय मुख्य पार्टी यस प्रकरणमा पूरै ध्यानमग्न अघाएको बकुल्लाको अभिनयमा हुनुको कारण बुझ्न कुनै कठिनाइ छ र ? दिनको घामझैँ छर्लंग यस्तो विषयमा सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनीसम्म नदिने युवा विद्यार्थी संगठनको वक्तव्यलाई यस प्रकरणमा युवा विद्यार्थी संगठनहरूको मतियारीको दस्ताबेज कसैले भन्यो भने त्यसलाई खण्डन कसरी गर्न सकिएला ? तसर्थ, आज चर्चित एनसेल कर प्रकरणको मुद्दा देश र जनताविरुद्ध सत्ताधारी र मुख्य प्रतिपक्षी पार्टीले संस्थागत रूपमा गरेको भ्रष्टाचारको गर्भबाट जन्मिएको मान्न करै लाग्छ ।
सत्ताधारी पार्टीहरू यस्तो अपराध गर्न किन तम्सिए होलान् त ? पुँजीवादी राजनीतिक प्रणालीहरूको शासकीय वैधानिकताको मुख्य औजार हो- चुनाव । मतपत्र आफ्ना पक्षमा देखिनुपर्‍यो, मतपत्रमा छाप कसरी लाग्यो भन्ने महत्त्वको विषय हुन्न । पहिलो लहरका सम्पन्न पुँजीवादी मुलुकको चुनावको जितहारका निम्ति भूमिका खेल्ने विषय र अवस्था अलि बेग्लै हुन पुगेको भए पनि नेपालजस्ता विकासोन्मुख र भारतजस्ता विकासशील भनिएका मुलुकहरूका संसदीय चुनावहरू आर्थिक चलखेलबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने गरेको तथ्य स्पष्ट नै छ ।
आर्थिक चलखेलको अर्थ मत किनबेच मात्र होइन, बरु समग्र चुनावी प्रतिस्पर्धाको उत्सवमयता नै अति खर्चालु हुन्छ । निर्वाचन आयोगहरूले यस्ता देशमा तोकेका चुनाव खर्चको सीमा पार्टी कार्यालयहरूमा ठट्टाको विषय बन्छ र आयोगमा पेस गरिने चुनाव खर्चको विवरण नक्कली हुन्छ । चुनाव आयोगका अधिकारीहरू पनि हिसाबको नक्कलीपना बुझ्छन् तर उनीहरू पनि त्यही व्यवस्थाको अंग भएकाले भाइचारा भ्रष्टाचारलाई सदाचारको छाप लगाइदिन्छन् ।
यसरी पुँजीवादी व्यवस्थाका सबै तहका निर्वाचन खर्चालु अजिंगरजस्ता बनेका छन् । चुनावलाई खर्चको अजिंगरमय बनाउन पुँजीवादी राजनीतिज्ञहरू बाध्य पनि हुन्छन् । त्यस्तो नबनाइए श्रमिक वर्गका मान्छेहरू पनि केवल ठीक मुद्दाका आधारमा बहुमत जित्न सक्ने खतरा आउन पनि सक्छ । यसरी सत्ताधारी राजनीति गर्न जताबाट भए पनि ठूलो धनराशि पुँजीवादी पार्टीहरूले र त्यसका नेताहरूले जम्मा गर्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।
त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्थामा चुनावहरू पुँजीपतिहरूका निम्ति नेता र नीति खरिद गर्ने हाटबजारमा परिणत हुन्छन् । एनसेलको कर प्रकरणको जोल्ठिङ त्यस्तै हाटबजारको सापानापाको उपज भएको बुझ्न धेरै दिमाग रगड्नु पर्दैन । देशमा नयाँ संविधान बनेपछि चुनावहरूको तयारीको समय चलिरहँदा नै ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एनसेलको यो कलात्मक कर प्रकरणको जायजन्म हुनुले 'चुनाव एक हाटबजार' को मान्यतालाई नै पुष्टि गर्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गएको संघीय संसद्को निर्वाचनको आफ्नो खर्चबारे एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, 'मेरो प्रतिद्वन्द्वीले चुनावमा धेरै खर्च गरेकाले मैले पनि ऋण लाग्ने गरी खर्च गर्नुपर्‍यो ।' त्यस चुनावमा भट्टराईका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा -नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए ।
प्रधानमन्त्री भइसकेका भट्टराईलाई अत्याउने गरी भ्रष्टका रूपमा चर्चा नभएका नारायणकाजी श्रेष्ठले कहाँबाट खर्चको जोहो गरे होलान् ? त्यस निर्वाचनमा प्रमुख नेताहरूको चुनाव खर्च कम्तीमा दस करोड भएको थियो भनी अनौपचारिक रूपमा कार्यकर्ता, पत्रकार र जनताले सर्वत्र भनेकै छन् । त्यो रकम आयो कहाँबाट ? आउँछ कसरी र किन ?
निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई तीन वटा स्रोतबाट खर्च जुट्ने गरेको देखिन्छ । एक, नातागोता र शुभचिन्तक । दुई, विभिन्न कमाउ सरकारी पदमा पुर्‍याइएकाहरू, र तीन, निर्वाचित गराएर फाइदा लिन चाहने देशी-विदेशी व्यक्ति वा संस्थाहरू । आम जनताले नै खर्चको भार उठाउने रूपचन्द्र विष्टको मोडल त विष्टसँगै हराइहाल्यो ! अपवादबाहेक आम नेताका परिवार र शुभचिन्तकहरू निर्णायक चुनाव खर्च जुटाउने हैसियतका हुँदैनन् भन्ने यथार्थ सहजै बुझ्न सकिने तथ्य हो । तब बाँकी रहन्छन् चुनावमा सहयोग गर्ने दुई थरी ।
पहिलेदेखि नेताको आशीर्वादका कारण कमाइरहेका र निर्वाचित भएमा फाइदा असुल्न तम्सेका । आदर्श र मूल्यमान्यताका निम्ति घरखेत सिध्याएर राजनीतिमा त्याग गर्ने राजनीति त आजका संसद्वादी सबै मार्काका पार्टीहरूमा नरहेको सबैले देखेकै हो । यस्तो माहोलमा जसले लगानी गरे पनि मुख्य निसाना त जितेपछि नाफा असुल्नु नै हुने गर्छ ।
त्यसकारण एकाध सहयोगबाहेकका चुनावमा लगानीको जोगाड आफैं मा भ्रष्टाचार हो किनभने त्यो जोगाड आम रूपमा पारदर्शी हुन्न । त्यसभन्दा पनि बढी आगामी भ्रष्टाचारको अनिवार्य कारक हो किनभने लगानी नाफामा नबदलिए पुँजीवाद नै धराशायी हुन्छ, एकाध नेताका देखावटी आदर्शवादी फुर्तीफार्तीको त के कुरा !
विकसित मानिने युरोप-अमेरिकाका पुँजीवादी पार्टीहरूले नेता प्रत्यक्ष व्यवसाय गर्ने अनि चन्दालाई पारदर्शी बनाउनेलगायत औपचारिक विधि विकास गरेकाले निर्वाचनलाई कसरी लेनदेनले प्रभावित गर्छ भन्ने विषय आम श्रमिक जनताले सजिलै चाल पाउन सक्दैनन् । विकासोन्मुख र विकासशील भनिने देशका पुँजीवादी पार्टीहरूले त्यस्तो व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेकाले निर्वाचन एउटा मुख्य भ्रष्टाचारको कारकका रूपमा छरपस्ट हुन पुग्छ । आज भएको त्यही त हो । यस आलेखमा एनसेलको करलाई कलात्मक यसकारण भनिएको हो, त्यसले दुई तिहाइवाला बहुमत निर्माणका लागि निर्वाचनमा खर्चको काव्यात्मकता प्रदान गरेको प्रस्ट देखियो ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालजस्तो उत्पीडित देशमा सजिलै बहिष्कृत हुने गरी आउँदैनन् र गान्धी युगमा समेत बि्रटिस कपडा पूरै अस्वीकार हुन सम्भव भएन भन्ने सरल तथ्य बुझ्नैपर्छ । आजको युगको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी कम्पनीहरू बहिष्कृत हुन होइन, सत्तालाई नै पहिले निरीह दलाल बनाएपछि मात्रै आउने हुन् ।
आज नेपालमा ठूला पार्टीका मुख्य नेताहरूका मोबाइलमा एनसेलको बढी सिम छ कि एनटीसीको ? कार्यकर्ता साथीहरू एकचोटि बुझ्ने कष्ट त गर्नुहोस् ! नेपालका खासखास क्षेत्रमा एनसेलको मात्र नेटवर्क किन टिप्छ ? एनटीसीको सेवा युवाहरूका निम्ति क्रमशः झन्झटिलो किन बन्दै छ ? के यो सबै एनसेल कम्पनीले मात्र गरेर सम्भव हुने हो कि नेपाली शासक वर्ग र प्रशासक फाँटवालासमेत मिलेपछि हुने हो ?
आम जनताको व्यावहारिक जीवन कब्जा गरिसकेपछि बहिष्कार कसरी हुन्छ ? जनताले गर्नै सक्दैनन् । जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन नमीठो भएर बन्द भएको हो र ? यथार्थमा त बि्रटिस टोबाको र इन्डियन टोबाको लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीमा नेपालको दलाल पुँजीपति वर्गले सूर्य टोबाको चुरोट कम्पनी सुरु गरेपछि जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गराउने प्रपञ्च सम्पन्न गराइएको थियो । आजको बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला पुँजीवाद र देशको दलाल सत्ताको सालनालको गठबन्धनलाई नबुझी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको माल बहिष्कारको नारा र यत्न रेल छुटेपछि टिकट नम्बर हेर्नु जस्तै दशा हो भनी न्यायप्रेमी जमातले अब बुझ्न सक्नैपर्छ ।
एनसेलको कलात्मक कर प्रकरणमा एकाएक नायक जसरी प्रकट भएको छ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाकृत सर्वोच्च अदालतको नयाँ फाँट । यो त्यसैको उत्तराधिकारी फाँट हो, जसका पूर्ववर्ती गोपाल पराजुली र दीपक जोशीहरू थिए । एनसेलको करबारे मुद्दा कहिले परेको हो श्रीमान्जी ? के यो आलीकुलाको अंश मुद्दा थियो कि जोइपोईको छुट्टीभिन्न, जसलाई श्रीमान् सर्वोच्च अदालतले निर्णयको मिति धकेल्दै आजसम्म ल्याइपुर्‍यायो ? अदालत नेपालमा कति बिकाउ र बदनाम छ भन्ने कुरा बिचौलिया वकिलहरूको जाँड पार्टीमा जाँड नखाई सुन्नेहरूले बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीश फेरिनेबित्तिकै उखरमाउलो केही आशा अदालतले सधैँ फालेकै हुन्छ । चाहे त्यो उखरमाउलो आशाको धारिलो फर्साले चालीस वर्षको संघर्षबाट बनेका मधेसी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता ध्वस्त किन नहोऊन्, अनि ध्वस्त सन्नाटालाई चिर्दै सुशीला कार्कीहरू नियमविपरीतका सरकारी गाडी फिर्ता नगरेर सदाचारको प्रवचन दिँदै किन नहिँडून् ! भनिन्छ, नेपालमा सरकार देशबाहिरबाट चल्दा न्यायालय अनाथ हुन्छ, न्यायालय देशबाहिरबाट चल्दा सरकार भताभुंग हुन्छ ।
धेरै चीज बहुराष्ट्रिय पुँजीवादले निर्धारण गर्ने भएपछि अदालतले चाहिँ मंगल ग्रहको आदेशको तामेल गरोस् त ? एनसेलको कर मुद्दा अदालत पुग्नु, अझ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणतिर लम्किनु कलात्मक कर प्रकरण हुनुको अकाट्य दसी हो । नेपाली जनतालाई देशको सरकार, प्रशासन र अदालत नै भीरको भारी छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत त दहको सहारा गोही हुने नै छ । जेजे गरेर भए पनि त्यो लाभकर सरकारको खातामा नल्याउने खेल हो अबको, किनभने उठाउनुपर्नेले पहिले नै कलात्मक असुली गरिसकेको छ । दिनेको हात त सधैँ माथि हुन्छ, ऊ गलोस् किन ?
घूस र कमिसन खान नपाउने र नखानेका निम्ति एनसेलको कर प्रकरणको शिक्षा चाहिँ के हो ? यसको उत्तर खोज्नु नै सर्वाधिक महत्त्वको कुरा हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले खास अवस्थामा कर नतिर्ने वा छल्ने विषय मुख्य होइन, बरु सरकार, प्रशासन र अदालत सबैलाई दलालमा रूपान्तरण गरेर पूरै देशलाई कज्याउने उद्देश्य र रणनीति डरलाग्दो मुद्दा हो ।
तिनले राजनीतिज्ञ र प्रशासकलाई दलाल बनाएर नेपालजस्ता देशको सार्वभौमसत्तालाई आफूअनुकूल कसरी ढाल्दै लैजाँदै छन् भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्नु मुख्य कुरा हो । ओली र दाहालकृत राष्ट्रवादीहरू समृद्धि ल्याउन व्यस्त छन्, फुर्सद छैन तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले देशको सार्वभौमसत्तामाथि नयाँ तरिकाले आक्रमण गरिरहेकाले देशभक्तिको आन्दोलनको नयाँ रणनीति जरुरी छ भन्ने यथार्थतिर ध्यान दिन वास्तविक देशभक्तहरूले फुर्सद त निकाल्नैपर्ने हो ! प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ ०८:०५
मेरी आमा महान् होइनन्
वैशाख २१, २०७६ आहुति
केही महिनाअघि एक जना साथीको आमाको मृत्युको शोकमा समवेदना प्रकट गर्न पुग्दा उनले भन्थे, ‘उमेर त आमाको बयानब्बे थियो तर के गर्नु... आमा भनेको पाँच सय वर्ष बाँचे पनि थोरै लाग्ने रै’छ  । ’ विश्वका विभिन्न सभ्यताहरूमा रचिएका साहित्यहरूमा आमाको विम्ब धेरै नै माथि छ  ।
पूर्वीय नाम दिइएको हाम्रो समाजमा त आमालाई अझै व्यापक आयाममा प्रस्तुत गरिएकै छ । धर्तीलाई आमा, जन्मभूमिलाई मातृभूमि र यहाँसम्म कि फल दिने वृक्षलाई समेत आमा सम्बोधन गर्ने संस्कृति छ । जन्मभूमिलाई पितृभूमि भनिने पश्चिमी सभ्यताहरूमा समेत आमाको विम्बलाई माथिल्लो स्थानमा नै श्रद्धेय बनाइएकै छ । हुन त पौराणिक या आजको साहित्यमा खराब आमाहरूको पनि चर्चा नभएका होइनन् तर ती अपवादका रूपमा वा ‘त्यस्ती नि आमा हुन्छे र ?’ भन्ने अर्थमा प्रकट हुन्छन् । आमाहरू अन्य मानिसका निम्ति खराब वा त्याज्य हुन सके पनि आफ्ना सन्तानको नजरमा आमाहरू सधैँजसो पूजनीय स्थानमा रहेको स्पष्टै अनुभूत गर्न सकिन्छ । सन्तानहरूको भावनाको सबैभन्दा कोमल क्षेत्रमा सबैभन्दा संवेदनशील पत्र बनेर आमाहरू बसी नै रहेका छन् ।
सन्तानहरूका निम्ति आमाको स्नेहमय भूमिका महान् छ र आमाहरू महान् हुन्छन् भन्ने वकालतप्रति हत्तपत्ती असहमति जनाउन जो कोहीलाई हम्मे पर्छ । किनकि सायद आमाहरूबारे चर्चा चल्दा आफ्नै आमाले आफ्नो निम्ति कष्ट उठाएका भावुक कोमल दृश्यहरूले हामीलाई छपक्कै भिजाइदिन्छन् । हामीमध्ये धेरैजसोले आफ्नी आमाको आलोचना गर्दैनौं, बरु आफ्नो बाबुको भने अनेक बदख्वाइँ पनि गर्ने गर्छौँ । यस्तो लाग्छ कि आमा प्राकृतिक कारणले बन्ने भएकाले सन्तानहरूमा आमाप्रति बन्ने दृष्टिकोण पनि प्रकृतिप्रदत्त नै त हैन ? पशुजगत्मा आमा र सन्तानबीचको स्नेहमय साइनो प्रजननदेखि खास अवधिसम्म मात्र रहने गरेको पाइन्छ । सन्तान वयस्क भएर आफ्नै बर्कतमा आधारित मौलिक जीवनमा प्रवेश गरेपछि आमा र बाबु भाले र पोथी सन्तानका निम्ति केवल पोथी वा भाले मात्र रहन्छन् । त्यसपछि आमा र सन्तानबीचको सम्बन्धको अन्त्य हुन पुग्छ । मानिस पनि एक विशिष्ट पशु नै हो, तब मानिसको आमाचाहिँ मानिसको निम्ति यति धेरै कसरी फरक ? निश्चित रूपमा मानिस सांस्कृतिक प्राणी भएर नै यो फरक प्रकट भएको हो । संस्कृतिका कारण सन्तानहरूलाई आमा महान् लागेको हो भनी मान्दा संस्कृति त ज्ञानको सीमा, उत्पादनको कार्य ढाँचा, वर्गहरूको बनावट, महिला पुरुषबीचको सबन्धको प्रकृति इत्यादि कारणहरूले बन्न पुग्छ । संस्कृतिलाई आलम्ब बनाएर आमाबारे चिन्तन गर्ने हो भने आजका सन्तानहरूलाई महान् लाग्ने आमाहरू फरक संस्कृति भएको पुरानो समाजमा थिएनन् र पछि भविष्यको संस्कृतिमा पनि हुने छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ । विषय आमाका बारेमा भएकाले स्वतः संवेदनशील पनि छ ।
नेपालमा आलोचनात्मक चेतबारे क्रमशः बहस गम्भीरतातिर बामे सर्दै छ । आलोचनात्मक चेतनाको सम्बन्ध चेतनालाई वैज्ञानिक बनाउने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । भावनात्मक लगाव, वैचारिक वा धारणागत पूर्वाग्रह, व्यक्तिको निश्चित स्वार्थलगायतका प्रवृत्तिबाट तटस्थ बनेर तथा विज्ञानका नियमहरूलाई फ्रयोग गरेर व्यक्ति, घटना र वस्तुको गतिलाई हेर्ने, विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने दिशामा त्रियाशील चेत नै आलोचनात्मक चेतना हो । त्यसैले नै आलोचनात्मक चेत निर्माण र त्यसको प्रयोगको प्रक्रियामा होमिनु भनेको मानव जगत्मा सबै सांस्कृतिक बन्धनबाट मुक्तिको कष्ट साध्य तर उदात्त महायात्रामा यात्रावान् हुनु हो । आज नेपाली समाजलाई अघि बढाउने पढे–लेखेका युवाहरूले भनेजस्तो ‘नयाँ डिस्कोर्स’ चलाउने आलोचनात्मक चेत चाहिएको यथार्थ सही नै लाग्छ । त्यसो हुँदा आमाको महानताबारे पनि एक थान विवेचना र बहस किन सुरु नगर्ने ? अनि महानताको अवधारणाकै सम्बन्धमा पनि किन छलफल नगर्ने त ?
दास–मालिक हुँदै सामन्तवादी युगसम्म महान् व्यक्तिको अवधारणा अगाडि आयो । एकातिर युद्ध विजेता र धेरै मानिसमाथि शासन गर्ने शासकहरू महान्का रूपमा परिभाषित भए भने अर्कातिर चिन्तकहरू, वैज्ञानिकहरू र परिवर्तनका अभियन्ताहरू महान् व्यक्ति वा आस्थाका रूपमा सम्मानित हुन थाले । युद्ध विजेता र शासकहरू त स्वघोषित महान् थिए । अझ विश्लेषण गरेर भन्दा तिनीहरूका अनुयायीको निम्ति महान् थिए किनभने तिनीहरूलाई महान् भनी स्तुति गर्दा अनुयायी र समर्थकको जीवन तत्कालीन समयमा वैभवपूर्ण वा सहज हुन्थ्यो । नेपोलियन, हिटलर वा राजाहरू तिनका अनुयायी वा समर्थकको निम्ति महान् गनिनु यही परिप्रेक्ष्य थियो अर्थात् शासकीय तजबिजको परिप्रेक्ष्य । तर चिन्तक, वैज्ञानिक र परिवर्तनका अभियन्ताहरूको प्रशंग भने बिल्कुल फरक देखिन्छ । गौतम बुद्धदेखि कार्ल मार्क्स, न्युटनदेखि आइन्सटाइन र लियो तोल्सतोयदेखि चार्ली च्याप्लिनसम्मका प्रतिभाहरूलाई तिनका अनुयायी र प्रशंसकहरूले यसकारणले महान् भनेका होइनन् कि उनीहरू शासक थिए, बरु उनीहरूले तत्कालीन समाजका आम मानिससँग तुलना नै गर्न नमिल्ने स्तरमा खास विधामा विशिष्ट योगदान दिन पुगेका थिए । शासकहरूलाई महान् भन्ने अवधारणा त मित्थ्या भैहाल्यो, त्यसमा बहस त्यति जरुरी अब देखिन्न । तर चिन्तक, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, कलाकार आदि क्षेक्रका मानव सेवासँग सम्बन्धित व्यत्तिहरूलाई महान् भनियो, त्यस महान् अवधारणाबारे बहसचाहिँ जरुरी छ ।
कुनै क्षेक्रको खास व्यत्तिलाई महान् भन्नु भनेको नारायणगोपाललाई स्वर सम्राट् भन्नुभन्दा कति फरक हो ? नारायणगोपाल स्वर सम्राट् हुन् भने दीप श्रेष्ठ स्वर राजा हुन् कि मन्त्री ? रायन, रामेशहरूचाहिँ के नि फेरि ? कार्ल मार्क्स महान् हुन् भने हेगेल र फायरवाखचाहिँ उपमहान् भन्ने कि के ? जबकि उनीहरूको खोजबिना मार्क्सको खोज अगाडि आउन असम्भव थियो । न्युटनअघिका वैज्ञानिक नभई न्युटन पूर्ण हुँदैनथे, न्युटन हुँदैनथे भने आइन्सटाइन असम्भव । यति मात्र होइन, ब्राह्मण धर्म हुँदैनथ्यो भने प्रतिरोधी बुद्ध चिन्तन जन्मिदैनथ्यो, पुँजीवाद हुँदैनथ्यो भने मार्क्सवाद जन्मिदैनथ्यो । यसरी इतिहासमा खास व्यक्तिको जतिसुकै विशेष योगदान पनि त्यस योगदानसम्म पुर्‍याउने पूर्ववर्ती कार्यहरूको अन्तिम विन्दु मात्र हुन् । त्यति मात्र होइन, त्यस योगदान जन्मिनुपर्ने त्यसविपरीतका कार्यकारणहरूको समेत नकारात्मक रूपमा योगदान त्यसमा जोडिन पुग्छ । इतिहासमा व्यक्तिको भूमिका हुन्छ । कसैको कुनै विषयमा कसैको अर्को विषयमा विशिष्ट भूमिका हुन्छ तर त्यो भूमिका पूर्ववर्ती लामो ऐतिहासिक प्रक्रिया र परम्परागतकै एक कडीका रूपमा प्रकट भएको हुन्छ । तब त्यस निरन्तर ऐतिहासिक प्रक्रियाका कोही महान्, कोही कम महान् र कोही तुच्छ कसरी भन्न मिल्छ ?
जसरी शासकहरूलाई तिनका अनुयायीले महान् स्वीकार गरी प्रचार गरे, त्यसैगरी त्यही रोग संक्रमित भएर मानव सेवाका प्रतिभाहरूलाई पनि महान् देख्ने अवधारणा त बनेन ? बनेकै लाग्छ । गजबको कुरा त के छ भने विज्ञान, दर्शन, समाज सुधार, मनोरञ्जन आदि क्षेत्रका जुन जुन प्रतिभालाई महान् भनिन्छ, त्यसमध्ये सबैजसोले आफू महान् भएको दाबी कहिल्यै गरेका थिएनन् । परम्परागत महान्को अवधारणालाई मानिराख्ने हो भने एउटा मिहिनेती किसान र मजदुर कहिले पनि महान् हुने छैन जब कि महान् मानिएकाहरू किसान र मजदुरको उत्पादन उपभोग नगरी ‘महान् योगदान’ गर्न जीवित रहन पनि सक्दैनथे । यसरी पुरानो महानताको अवधारणा बौद्धिक सम्पत्ति निजी मान्ने निजी सम्पत्तिमा आधारित दृष्टिकोणको उपज देखिन्छ । त्यसको आजको विस्तारित रूप बौद्धिक सम्पत्तिमाथि प्याटेन्ट राइटको अवधारणा हो । बासमती चामल नेपाल, भारत, अमेरिका वा सिंगै वा मानव जातिको ? पुँजीवादले भन्यो— जसले पहिले दर्ता वा दाबी गर्‍यो त्यो देशको । बासमती चामल वा तमाम मानव बौद्धिकताको इतिहास कम्तीमा पचहक्तर हजार वर्षको छ, तब आजको एक देशको कसरी हुन्छ ? त्यसरी नै महान् दर्जा दिइएका व्यत्तिका योगदान पनि हजारौं वर्षको मानव समाजको योगदानमाथि प्रकट हुन सम्भव भएको हुन्छ । अझ यो पनि स्वतः बुझिने कुरा हो कि भविष्यमा आजका भन्दा बढी योगदानहरू र योगदानकर्ता व्यक्तिहरू प्रकट हुनेछन्, तब के आजका महान् त्यतिबेला तुच्छ हुनेछन् ?
जब सर्वस्वीकार्य आमाको महानताबारे छेडछाड गर्नु छ भने यति भूमिका बाँध्नु त सायद जरुरी नै हुन्छ । तैपनि यो गाह्रो काम नै हो । आमाबारे कुरा गर्दा मेरो मस्तिष्कभरि रातमा आठ घण्टा अक्सिजन लिएर दिनभरि गुडुवा कुर्चीमा गुडिरहेकी चौरासी वर्षकी आफ्नी आमा झल्झलिरहेछिन् । त्यसैले आमाको महानताबारेको यस छलफलमा दुइटा कुरा गर्नु ठीक होला । एक, महान् भन्ने अवधारणाबारे यस आलेखमा उठाइएका प्रश्नहरूलाई थप बहसका निम्ति थाती मानौं । दुई, पाठकहरूका आफ्ना आमासम्बन्धी संवेदनामा चोट महसुस न्यून गर्न म आफ्नै आमाको जीवनलाई अगाडि राखेर उनी महान् हुन् कि के हुन् भनी छलफल अगाडि बढाऊँ । यसको अर्थ आजसम्म जुन अवधारणाका आधारमा कसैलाई महान् मानियो, त्यसबाट हेर्दा मेरी आमा र आम आमाहरू कस्ता देखिन्छन् होला ? हेर्ने प्रयत्न गरौं । परम्परागत रूपमा महान् त्यसलाई भनियो जसले खास क्षेत्रमा खुसीसाथ विशिष्ट योगदान गर्‍यो । के आमाको माहनता परम्परागत महानताको अवधारणाको कसीमा शुद्ध नै निस्कन्छ ? आफ्नै आमाको जीवन र चरित्रलाई अगाडि राखेपछि यो आलेखबाट लाग्ने केही गल्तीको खत त अवश्य माफ हुने नै छ ।
मेरी आमाको नाम कान्छी अच्छामी । हाल चौरासी वर्ष । हामी सन्तानहरू उनलाई तिमी भन्दै हुर्क्यौं र तिमी नै भन्छौं । विसं १९९० को भूकम्प गएको दुई वर्षपछि जन्मेको भन्छिन् । नौ वर्षको उमेरमा उनका बाआमाले एघार वर्षको मेरा बासँग बिहे गरेर अन्माइदिएछन् । बाका नि बा मेरा हजुरबाले आमैलाई जग्गेदेखि घरसम्म काखमा बोकेर ल्याइपुर्‍याएछन् । बालविवाहको कहालीलाग्दो समयको जीवन हो उनको । चौध वर्षबाट लगातार अठारदेखि चौबीस महिनाको फेरमा बच्चा जन्माउन थालेको बाध्यता वा त्यतिबेलाको नियमित मानिने क्रम त्यतिबेला मात्र थामियो, जब मेरो जन्म भयो । त्यस्तो यसकारण भयो कि म जन्मिंदा मेरा बा मरेको एक महिना मात्र भएको रहेछ । अर्थात् मेरी आमा तीस वर्षको हाराहारीमा गर्भमा बच्चा लिएरै ‘बिधवा’ वा आजको भाषामा एकल भै’छन् । आमासँगै पँधेरो वा मेलामा मलाई देख्दा कुनै महिलाले मलाई हेरेर ‘गर्भे टुहुरो यही हो ?’ सोध्थे, कोही छिल्लिन मन पराउनेचाहिँ, ‘सबै सोहोरसार पारेर निस्केको कान्छो यही हैन त !’ हाँसो गर्थे । चौध वर्षको उमेरदेखि जन्माएका मध्ये उनका सन्तान हामी पाँच आजसम्मै जीवित रह्यौँ । उनीबाट जन्मिएर मरेका मेरा दाइ दिदीहरूबारेको कथा भन्न अहिले समय र जरुरी दुवै छैन ।
उमेर तीसको वरपर अर्थात् आजको सचेत युवाको घरजम गर्ने समयतिर आमा त जीवित पाँच सन्तानसहित लोग्नेविहीन भइन् त् आमा । त्यतिबेला ‘विधवा विवाह’ स्वाभाविक नभए पनि विधवा महिला पोइल भागिजान सक्थे तर आमाको त्यस्तो चेष्टा कसैले देखेनन्, बरु छिमेकमा सत्चरित्रका निम्ति उदाहरण दिने तत्कालीन सत्पात्रकै रूपमा सबैले मानेको देखिन्थ्यो । दलित समुदायकी एक एकल महिलाको जीवनमा आउने आर्थिक समस्या अनि सामाजिक अपमान र कष्टको कुरा आज धेरैले अनुमान वा समअनुभूतिको प्रयत्न गर्ने युगमा छौं, ती सबैबाट ती आजकी बूढी घाइते त पटक पटक भइन् होला नै तर न्यूनतम जसोतसो पार लाग्ने गरी यात्रा गरिछाडिन् । अहिले कल्पना गर्दा अकल्पनीय लाग्ने दुःखलाई छिचोलेर उनले बाँचेका हामी दुई छोरी र तीन छोरा हुर्काइछाडिन् । अहिले जेठी छोरी र जेठो छोरा सत्तरी नजिकै पुगिसके । तर मलाई आमाले भन्न छाड्दिनन्, ‘ए कान्छा, घर बनाइस्, बुढेसकालमा कहाँ बस्छस्, केटाकेटीलाई कहाँ राख्छस् ?’ अंशबन्डा गर्दा नापीमा छुटेको दुई आना जग्गा जोडिएको एक आनाको मात्र लालपुर्जा भएको जग्गा आमाको नाममा राखिएको छ । आमा भन्न भ्याउँछिन्, ‘ल ल अन्त सकिनस् भने मेरै यही जग्गामा आएर बस्नू, यसमा दाइ–दिदीको हक मैले छाडे लाग्ने त हो !’ बाफ रे, चौरासी वर्षको उमेरमा समेत बच्चाहरूबारे चिन्ता मात्र हैन योजनासमेत छ ।
यी बूढीमाऊ अर्थात् मेरी आमा बुहारीसँग रिस उठ्दा बुहारीको थालमा थपीथपी पस्केर ख्वाउने गर्दिरै’छिन्, भाउजू बूढीहरू हाँस्दै सुनाउँछन् । सबै काममा आफैं अगाडि सर्ने । चेपारे घस्नै नजान्ने, सीधा भाषामा बोल्ने, जिन्दगीभरिमा चौध वर्ष कान्छी ठूली दिदीसँगको विवादमा एक पटक आमा रोएको देखेथें, त्यसबेला लागेथ्यो— आमा पनि रुने रै’छिन् । सायद मैले बुझ्ने बेलासम्म उनको नरोइनहुने विषय धेरै सकिइसकेका थिए । स्वाभिमानको मुख्य गुण थियो, आफ्नो गरिबीलाई माइतीले खिसी गरेपछि जिन्दगीमा कहिल्यै फर्केर गइनन् । रत्यौलीमा छोराहरू नहुँदा नाच्ने गर्थिन् । परम्परागत औषधिहरूको राम्रै ज्ञान थियो उनमा, गाउँलेहरूलाई समेत केही घाउ–खटिराको उपचार गर्थिन् इत्यादि । र, पितृसत्तात्मक संरचनाले तोकेका मूल्य मान्यतामुताबिक महिलाहरूको आचरणको पक्षमा कठोर त होइन, दृढ पक्षपाती भने अवश्य रहँदै आइन् । मेरी आमाको संक्षिप्त कथा र विशेषता लेखको विषयका लागि पर्याप्त छ । मेरो जीवनमा आमाको भूमिका र प्रचलित ‘आमा महान्’ वाला अवधारणाबाट हेर्दा मेरी आमा पनि कम्तीमा मलाई त महान् नै लाग्नेछ । तर यसरी केवल भावुकतामा डुबेर अनि प्रचलनमा बगेर मात्र आमाको महानताबारे भावनाको पुनरुत्पादन गर्नु स्वयं आमाहरू र अन्ततः समस्त नारीहरूको अस्तित्वबारे न्याय हुन सक्दैन । त्यसैले मेरी आमाको विशिष्ट विशेषतासहितको जीवनलाई पनि आलोचनात्मक ढंगले हेर्ने साहस गर्नैपर्छ । आजको पुस्ताले हरेक विषयलाई आलोचनात्मक ढंगले हेर्ने विधिमा उक्लिनैपर्छ ।
कान्छी अच्छामी अर्थात् मेरी आमाको आजसम्मको जीवनलाई विश्लेषण गर्दा लाग्छ— दुःख र कष्टहरूको विशाल भुमरीबीचबाट जिउँदै आएकी महिला हुन् । उनको व्यक्तित्वमा पनि सकारात्मक वा नकारात्मक विशेषताहरू छन् नै । जताबाट हेरे पनि उनी आम नेपालका आमाहरू, त्यसमा पनि दलित आमाहरूमध्येकी एक आमा हुन् । आम नेपालका आमाहरू, त्यसमा पनि दलित आमाहरूसँग तुलना नै हुन नसक्नेस्तरको विशिष्ट योगदान उनको म केही पनि पाउँदिनँ । देश, जनता र क्रान्तिका निम्ति वा समाजको रूपान्तरणका निम्ति आफ्ना सन्तान हाँसी हाँसी कुर्वान गर्ने विशिष्ट आमाहरू पनि इतिहासमा वर्णित छन्, समाजमा छन् । त्यस्तै आमाहरूलाई महान् पनि भनिएको पाइन्छ । तर कान्छी अच्छामीसँग त्यस्तो महानता प्रदर्शन गर्ने न त अवसर नै आयो, न उनलाई त्यो चेतनामा पुर्‍याउने समाज नै उनको पछाडि थियो । उनी एक आम आमा नै हुन् र उनी आम आमा हुँदा मेरो हृदयमा उनीप्रतिको श्रद्धा अनि मायामा कुनै कमी आउने पनि होइन । मानव समाजमा वास्तविक प्रेम र स्नेहको निर्माण समाजको पिँधका श्रमजीवीहरूको आम जीवनबाटै त सिर्जना हुने हो । आज आमाप्रतिको जुन भाव सन्तानहरूको हृदयमा बन्ने गर्छ, त्यो भावको निर्माण कुनै ‘महान्’ पराक्रमले निर्माण भएको होइन बरु आम आमाहरूको आम कर्मद्वारा सिर्जना हुन पुगेको उदात्त मनोविज्ञान हो ।
कान्छी अच्छामीको जीवनलाई हेर्दै जाँदा के भेटिन्छ ? बाल्यकालदेखि महिला र दलितपनामाथिको लगातार पित्तृसत्ता र जातप्रथाबाट दलन–बहिष्करण । बालविवाह अर्को खपिनसक्नुको बर्बादीको कहर । ताजा बैंसालु उमेरमै ‘विधवा’ को दुःख अनि सामाजिक बन्धनयुक्त प्रताडना र लालाबालाको पोका पन्तरा । पुनर्विवाहको न जमानाको अनुमति थियो, न त चिचिला सन्तानलाई समस्यामा धकेल्ने उनको साहस । चौध–पन्ध्र वर्षले मात्र आफूभन्दा कान्छा छोराछोरीले बढेपछि ठट्टैमा पनि उनलाई कसैले सोधेन, ‘आमा तिमीलाई फेरि बिहे गरौं भन्ने मनमा कहिले आथ्यो ?’ किनकि सन्तानहरू पनि त पित्तृसत्ताबाटै प्रशिक्षित भएर आमामाथि निगरानी गर्ने भएका थियौं । रत्यौलीमा आमा नाच्दा मनमनै मलाई रिस मात्रै उठ्थ्यो, ठूला छोराहरू अगाडि त उनी कहिल्यै नाचिनन् । यसरी आमालाई हेर्दा एउटा पित्तृसत्ताले आफ्नो निम्ति धुन निकाल्न जथाभावी रेटेर चुँडाइदिएको सारंगीको तारजस्तो पाउँछु । उत्पीडन र बहिष्करणले थिल्थिलो भएको, बोली खोसेर विनम्र बनाइएको ओठहरू भेट्छु । मेरी आमा मलाई महान् लाग्दैन बरु उत्पीडित लाग्छ । के उत्पीडित हुनु महान् हुनु हो ?
पित्तृसत्तामा आधारित संरचना र सोचले बाउ वा पुरुषलाई स्वतन्त्र मात्र होइन, हुकुमी बनाइदिएको छ । महिलाहरूलाई बन्धनभित्र मुस्कुराउन प्रशिक्षित गरेको छ । सन्तानका निम्ति आमा रातभरि अनिदो बस्छे, पुरुष बच्चाले देख्ने गरी र्‍याल काढ्दै निदाइरहेको हुन्छ । अप्ठ्यारा सबै समयमा आमा हाजिर छ, बाउ गायब छ । पित्तृसत्ताका पलपलका कष्टबीचबाट बच्चाका निम्ति बाँचेको बच्चाले निरन्तर अनुभूति गर्दै जाँदा सन्तानका नजरमा आमालाई महान् देख्ने विभ्रम उत्पन्न हुन्छ जबकि बाउ वा पुरुषले पनि सन्तानप्रति आमाले जत्तिकै संवेदनशील भएर बच्चाप्रतिको जिम्मेवारी लिएको भए आमाप्रति सन्तानको मनमा त्यस्तो भाव बन्न सम्भव नै हुँदैनथ्यो । आमाहरू उत्पीडित भएका हुनाले बच्चाका निम्ति उनीहरूले पुरुषले भन्दा हजारौं गुणा बढी कष्ट बेहोर्नुपरेको हो । महिलाहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भने पितृसक्ताबाट मुत्त हुन्छन् भने सन्तानका नजरमा स्वतन्त्र आमाको उल्लास प्रकट हुनेछ, आजका जस्ता निन्याउरा आमा देख्दा त्यतिबेला सन्तानहरूलाई खपिनसक्नु लाग्नेछ । पितृसत्ताको महाउत्पीडनबाट बाध्य भएर आमाहरूले झेल्नुपरेको बोझ र कष्टलाई महान् भनी परिभाषित गर्दै जानु भनेको उनीहरूलाई त्यस्तै बनिरहन फुर्काउनु हो, जुन गलत कुरा हो । आजका आमाहरू पितृसत्ताको महाउत्पीडनबाट निर्मित महाउत्पीडितहरू हुन्, उत्पीडित आमाहरूको मुक्ति जरुरी छ । स्वतन्त्र आमाहरू जन्मिन आजका उत्पीडित आमाहरू जन्मिनुपर्ने पितृसत्ताको मृत्यु आवश्यक छ । उत्पीडित हुनु र उत्पीडनको जालमा अड्केर सिर्जित विवसताहरू, दुःखहरू, अपार कष्टहरू भोग्नु कुनै पनि अर्थमा महानता होइन । बाध्यता कहिले पनि महानताको जननी हुनै सक्दैन । त्यसैले आमाहरू उत्पीडित हुन्, उनीहरू सहानुभूति लायक छन् । सम्मान, श्रद्धा र क्षतिपूर्तिको हकदार छन् । तर आमाहरू महान् होइनन् । त्यसैले कान्छी अच्छामी अर्थात् मेरी आमा पनि महान् होइनन् ।